रबि - विकिपिडिया
रबि आजियाटा लिमिटेड
टेलिकम मलेसिया अन्तर्राष्ट्रिय बङ्लादेश लिमिटेड
मोबाइल टेलिफोन, एज, जिएसएम, जिपिआरएस, युएमटिएस, एचएसडिपिए, एचएसयुपिए, एचएसपिए, एचएसपिए+, एफडिडि-एलटिइ, एलटिइ-ए, भोएलटिइ,
एनटिटि डोकोमो (६.३%)
रबि आजियाटा लिमिटेड (बङ्गाली: রবি) वा रबि बङ्लादेशको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो। यो मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बेरहाड, भारतको भारती एयरटेल लिमिटेड, र जापानको एनटिटि डोकोमो निगम बीचको संयुक्त उद्यम हो। यसमा ६८.७% आजियाटा को नियन्त्रणमा छ भने २५% भारतीको नियन्त्रण छ र ६.३% जापानको एनटिटि डोकोमोको नियन्त्रण रहेको छ। यसको मुख्यालय बङ्लादेशको ढाकामा अवस्थित छ।
बङ्लादेशमा दूरसञ्चार क्षेत्रको पहिलो समायोजन रबि आजियाटा लिमिटेडको सञ्चालनको शुरुवातसँग १६ नोभेम्बर, २०१६ मा भएको थियो। रबी र एयरटेलको समायोजन पछि, समायोजित गरिएको कम्पनी रबि आजियाटा लिमिटेड हो। सफलतापूर्वक समायोजन प्रक्रिया पूरा भएपछि, रबि बङ्लादेशको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन सञ्चालकको रूपमा उभिएको छ। सामयोजित यस कम्पनी हाल राष्ट्रव्यापी रुपमा फैलिएको छ।
रबिले १९९७ मा दूरसञ्चार मलेसिया अन्तर्राष्ट्रिय (बङ्लादेश)को रूपमा ब्राण्ड नाम एक्टेल राखि सेवा सञ्चालन गरेको थियो । २०१० मा एक्टेल रोबिको नाममा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेको थियो। कम्पनीले आफ्नो नाम रोबिलाई रोबी आजियाट लिमिटेडमा परिवर्तन गरेको थियो। नोभेम्बर २०६ सम्म, रबी आजियाटाले आफ्नो मोबाइल सेवाका लागि दुई ब्राण्डहरू 'रबी' र 'एयरटेल' प्रयोग गर्दछ। एयरटेल रबिको एक स्वतन्त्र उत्पादन हो।
रबी आजीयाटा लिमिटेड, दूरसञ्चार मलेसिया र ए.के. खान कम्पनी बीचको संयुक्त कम्पनीको रूपमा शुरुवात भएको थियो । यो पहिला दूरसञ्चार मलेसिया अन्तर्राष्ट्रिय बङ्लादेश लिमिटेडको रूपमा चिनिन्थ्यो र जून १९९७ मा बङ्लादेशमा "एक्टेल" को रूपमा चिनिन्थ्यो। सन् २००८ मा, ए.के. खान कम्पनीले जापानको एनटिटि डकोमोको ३० करोड डलरको लागि ३०% भाग बेचेर यस व्यापारबाट निस्किएको थियो।
मार्च २८, २०१० मा, एक्टेललाई 'रबी' को रूपमा बदलीएको थियो जसको अर्थ बङ्गालीमा सूर्य हो। यसले २००९ मा आफ्नो मालिक कम्पनी आजीयाटा समूहको लोगो ग्रहण गरेको थियो। सन् २०१३ मा, पाँच वर्षको उपस्थिति पछि, डोकोमोकोले आजियाटाको लागि आफ्नो स्वामित्वलाई ८% मा झारेको थियो र आजीयाटाले ९२% लिएको थियो।
२८ जनवरी २०१६ मा, रबी आजीयाटा र एयरटेल बङ्लादेश समायोजन हुने घोषण गरिएको थियो जसलाई रबी भनिएको थियो। संयुक्त संस्था दुवै सञ्जालहरू मिलाएर ४० मिलियन प्रयोगकर्तालाई सेवा गरेको थियो। आजीयाटा समूहले ६८.३% , जबकि भारती समूहले २५% बाँकी अंशहरू एनटिटि डकोमोको स्वामित्वमा परेको थियो। अन्ततः रबी र एयरटेल १६ नोभेम्बर, २०१६ मा समायोज गरिएको थियो।
रबीले विभिन्न प्याकेजहरूको क्रम प्रदान गर्दछ। प्रिपेड र पोष्टपेड मोबाइल सेवाहरू प्रदान गर्नुको साथै यसले मूल्य-उत्पादित उत्पादन र सेवाहरू जस्तै संक्षिप्त सन्देश सेवा, जिपिआरएस, एज, साढे तेस्रो पुस्ता, एचएसपीए, साढे चौथो पुस्ता, दीर्घकालीन सञ्जाल, निश्चित विस्तृत पट्टि सेवाहरू प्रदान गर्दछ यसका साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ, मोबाइल बैङ्किङ, एसएमएस बैङ्किङ, कलर रिङ ब्याक टोन, एमएमएस, स्वागत टोनहरू पनि यसले प्रदान गर्दछ। बङ्गलादेशका सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू बीचमा सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ विस्तार क्षेत्र पनि यसैको छ।
↑ "रबिको प्रेस बिज्ञप्ति"।
↑ "बङ्लादेशमा आजीयाटा र भारती एयरटेल समायोजन गर्न सहमत भएका छन्", आजियाटा, २०१६-०१-२८, अन्तिम पहुँच २०१६-०१-२९।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=रबि&oldid=755739" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:५४, ४ नोभेम्बर २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।